Cunnooyinka leh borotiin badan - Cunto caafimaad leh oo dabiici ah. | Ragga Stylish
Cunnooyinka leh borotiin badan
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Nafaqeyn
Barootiintu waa qeyb ka mid ah cuntadeena waana wax lagama maarmaan u ah dhammaan dadka si isboorti u ciyaaraya. Shaqada mootooyinkaan ma ahan inay tamar siiyaan jirkeena, laakiin waa inay siiso Layligeedu waa inuu u dhaqmo sidii wakiil qaabeeya.
Borotiinnada waxay ka kooban yihiin asiidh amino oo u shaqeeya sida bonds peptide. Qaab dhismeedka iyo nidaamka amino acids-ka waxay ku xirnaan doontaa xeerka hidda-sidaha ee qof walba. Kaliya kalabar culeyska jirkeena ayaa ka kooban borotiin maadaama ay kujiraan dhamaan unugyada jidhkeena.
Hawlaheeda ugu muhiimsan waa inay ilaaliyaan qaabka iyo qaab dhismeedka unugyada jidhkeena. Taasna kaliya maahan, laakiin waxay ka caawineysaa dhammaan howlahooda muhiimka ah sida: hagaajinta burburka, nidaaminta shaqooyinkooda, ka difaacidda wakiillada dibadda, iwm. Gunaanad waxay lagama maarmaan u yihiin ilaalinta muruqyada wanaagsan.
1 Immisa barootiin ayuu jidhkeenu u baahan yahay?
2 Cunnooyinka borotiinku ku badan yahay
2.3 Jidh ahaan
2.6 Cunnooyinka kale ee leh borotiin badan
Immisa barootiin ayuu jidhkeenu u baahan yahay?
Qaadashadeeda ayaa ina siinaysa 4 kiilo oo kilo halkii garaam ah. Inta udhaxeysa boqolkiiba 10 iyo 35 kalooriyada aan cunno waa inay ahaadaan borotiin. Tusaale ahaan, Haddii aan cunno qiyaastii 2000 kalori maalintii, inta u dhexeysa 200 ilaa 600 kaloori waa inay ahaato borotiin, taas oo u dhiganta 50 ilaa 170 garaam.
In si kale loo fahmo, qofka culeyskiisu yahay 75 kiilo garaam waa inuu cunaa ilaa 60 garaam oo borotiin ah maalintii. Marka laga hadlayo ciyaartooyda waxaan ku qasban nahay inaan ku dhufanno 1.5 ilaa 1.8 garaam halkii kiilo ee uu qofku miisaamo, natiijada ka soo baxda gram ayaa noqon doonta waxa ay u baahan yihiin inay cunaan maalin kasta.
Cunnooyinka borotiinku ku badan yahay
Waxaa jira liis dheer oo cuntooyin ah oo ku jira cuntadeena oo ay ku jiraan borotiin, tan waxaan ugu soo galeynaa cuntooyinka leh borotiinka ugu badan. Waan xaqiijin karnaa taas guud ahaan waxaa laga helaa hilibka, ukunta, qaar ka mid ah waxyaabaha caanaha laga sameeyo, digirta, iyo kalluunka. Badarka iyo cuntooyinka kale ee dhirta ku jira waxaa ku jira qayb aad u hooseysa.
Borotiinnada laga helo hilibka xoolaha waa kuwo tayo kala duwan leh marka loo eego khudradda. Kuwa asal ahaan ka soo jeeda xoolaha waxay ka kooban yihiin dhammaan asiidhyada amino ee muhiimka ah iyo kuwa asalka khudradda ka kooban kala duwanaanta hoose ee amino acids. Marka waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro labadan nooc ee borotiinnada si waxtarkoodu u dhammaystirmo.
Farmaajada Parmesan celcelis ahaan waxaa ku jira 38 borotiin 100 g kasta oo cuntadan ah. Waxay ka mid tahay waxyaabaha caanaha laga sameeyo ee wax ka geysta inta badan, laakiin guud ahaan waxaa jira qaar kale oo badan oo liiska ka mid ah, sida jiis kubbadeed leh 25,5 g halkii 100 g. El Jiiska Burgos wuxuu ka kooban yahay 14 garaam iyo farmaajo manchego cusub ilaa 26 garaam.
Quruxda badan Waxay ka mid tahay kalluunka leh borotiin badan, way ka kooban tahay 24,7 g halkii 100 garaam. Tunaha waxaan sidoo kale ka helnaa il weyn oo borotiin ah, waan ka heli karnaa illaa 23 garaam marka cusub oo ka soo horjeedda qasacadaysan oo qiyaastii 24 garaam ah. Cuntooyinkan ayaa ku habboon cuntada sababta oo ah maadadooda omega 3 darteed.
Koodhka sidoo kale waxay bixisaa ilo badan oo borotiin ah oo leh dhowr Gram 21 iyo salmon 20,7 garaam iyo anchovies ilaa 28 garaam.
Cuntada badda sida cowska waxaan ka helnaa 23 garaamin prawns 24 garaam iyo clams ilaa 20 garaam.
Bakaylaha waxa ku jira 23 garaam Waxay muhiim u tahay cuntooyinka maadama ay dufanku ku yar yahay. Digaagga sidoo kale wuxuu soo bandhigayaa meel u dhow Gram 22 halkii 100 garaam iyo turkey 24 garaam.
Hilib sidoo kale ku jira saamiga sare leh Gram 21, wanku qiyaastii 18 garaam iyo doofaarka oo leh 17 garaam. Ku yaal sausages xarafka serrano ham waxay qaadataa xiddigga imanaya inuu wax ku darsado 30 garaam
Digiradu waa cunto caafimaad leh sida miraha, waxay bixisaa ishaas weyn ee borotiinka iyo amino acids si aad muhiim ugu ah cuntadeena. Hal xaqiiqo oo wax lagu biirinayo ayaa ah in kastoo ay asal ahaan ka soo jeedaan dhir, haddana waa la muujiyey waxay u dhameystiran yihiin sida borotiinnada asal ahaan ka soo jeeda xoolaha.
Lupins-ka waxaa ku jira il sare oo borotiin ah, imanaya si loo xakameeyo Gram 36,2 halkii 100 g ee cunnadan. Raac isaga qalalan soy u imanaya inay gacan ka geystaan 35 garaam iyo lsida misir leh 23,8 garaam.
Digir Waxay sidoo kale ku jiraan liiska leh borotiinka ugu badan ee lala qaato 23,2 garaam oo ay ku xigto digir la qalajiyey iyo misir. Soy waxay ka kooban tahay 24 garaam oo raaca digir iyo digir cad oo leh 21 garaam. Mid ka mid ah digiraha qaadashada ugu badan waa lupins leh 36 garaam 100 g oo cunto ah.
Looska ayaa sidoo kale ku jira liiska cuntooyinka leh borotiin badan. Ma saas tahay looska oo leh 25 garaam weheliso pistachios iyo yicib leh 18 garaam.
Cunnooyinka kale ee leh borotiin badan
Waxaa jira ukunta gaara halbeegga ilaa 13 garaam. Iyagu waa kuwa ay ku jiraan tayada ugu fiican ee borotiinnada ku dhex jira Ahraamta cuntada. Inta badan maaddadani waxay ku urursan tahay jaallaha, in kasta oo dhakhaatiir badan oo nafaqo-yaqaanno ahi ku taliyaan in la cuno oo keliya caddaanka maaddaama ay ku jirto dufan aad u yar, laakiin weli waxay haysaa boqolkiiba sare.
Seitan waa diyaarin cunto oo ku saleysan gluten qamadiga oo gaara inuu ka koobnaado ilaa 22 garaam. Gelatin waa mid kale oo ka mid ah cuntooyinka xiddigaha, oo ay ku jiraan ilaa 85% miisaankiisa borotiinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Cunnooyinka leh borotiin badan
Dusha indhaha indhaha
Strawberries waa naaxinayaan